Ogaden News Agency (ONA) – Kaligii taliye Melez Zenawi ha ku quusto kuwii ka horeeyey – by Harag-shabeel
Ugaadhsiga loogu jiro kaligood-taliyayaasha wadamada Carabta iyo kuwa Afrikaanka ah, ayaa gaadhay meeshii ugu sareysay. Shaashadaha televison-da aduunka, ayaa laga daawaday todobaadkan bilowgisii sidii foosha xumayd ee loo dilay dhulkana loogu jiiday boqorkii boqorada Afrika, hogaamiyihii Liibiya, Mu’amar Qadaafi iyo la taliyihiisii xagga amaanka Muctazim Qadaafi oo ahaa wiilkiisa.
Ka hor dilka Qadaafi, seefta kacdoonka shacabku waxay horey u sahayatay, Xusni Mubaarak, madaxweynihii hore ee Masar, oo maxkamada horteeda lagu keeno isagoo saaran sariirta bukaanka lagu qaado, lana filayo inuu ku soo hor deg-dego xukunka ilaahay (geerida) kahor intaan la gaadhin ku dhawaaqidda ciqaabta uu qaadigu ku ridi doono isaga iyo labadiisa wiil oo loo haysto dambiyo culus. Waxaa la yaab leh in eedeysane Xusni Mubaarag oo hadda ku baryootanaya inuu xanuunsanayo oo aanu lugihiisa ku iman karin maxkamadda horteeda in sanad ka hor nin saxafi masaari ah lagu xukumay dhow sanoo xabsi ah iyadoo dambi looga dhigay inuu qoray warar sheegaya inuu xanuunsanayo MW Xusni Mubaarag.
Waxaa sidoo kale, masaafuris ahaan dalka Saudi-Arabia ku jooga kaligii talihii Tunisia Zeynul Caabidiin-bin- Cali oo lafihiisa ka badbaadiyey in la dilo ama lagu qaado xukun adag.
Sidoo kale dadka reer-Ivory Cost, ayaa nasiib u yeeshay inay hirgaliyaan codkii ay ku doorteen hogaamiyihii mucaaridka mudane Xassan Wattara, oo cod aqlabiyad ah kaga badiyey kaligii taliyihii hore ee Ivory Cost Lauran Gbagbo. Ninkan ayaa gacanta lagu dhigay kadib markii uu ka dhago adeegay inuu xukunka si nabad ah ku wareejiyo, joojiyana dagaalka uu xukunkiisa ku difaacanayo taas badalkeedana ay sababtay in gacanta loo geliyo maxkamada dambiyadda aduunka ee Hauge.
Kaligii taliye Meles Zenawi, ayaa u muuqda mid iska indha tiraya waxa qabsaday hogaamiyayaal isaga ka awood badnaa, dadkooduna ka dhaqaalo fiicnaa, ugana dhawaa siyaasadda wadamada reer-galbeedka. Meles ayaa jeelka u diray xubnihii ugu sareeyey mucaaridkaAddis Ababajooga. Wuxuu albaabada u xidhay dhawrkii wargeys ee ka badbaaday kuwii hore, waxa cirka isku shareeray sicir-bararkii maciishada oo gaadhay meel aan ka qabasho lahayn.
Television-ka mucaaridka Itoobiya leeyihiin ee ESAT, ayaa soo tabiyey 28-Oct, dibad-baxyo balaadhan oo looga soo horjeedo cadaadiska iyo laynta aan kala sooca lahayn ee loo geysto qowmiyado badan oo daga koonfurta Itoobiya. Dibad-baxyadan koonfurta Itoobiya ka bilaabmay maalmahan, ayaa horu dhac u ah kacdoon shacab oo ifa-faaladiisu isa soo tarayso maalinba maalinta xigta ilaa ay gaadho sida la saadalinayo meel aan ka qabasho lahayn, xoogna aan lagu xalin karin.
Wararkii ugu dambeeyey ee ka imanaya gudaha dhulka Ogadeenya, ayaa xambaarsanaa guulo ay gaadheen Ciidamada ONLF, oo cagta mariyey asbuucan maleeshiyaad taabacsan taliska Woyanaaha, iyagoo sidoo kale, goobta kala tagay labo baabuur oo uuraal ah. Ciidanka Jabhadda ONLF, ayaa bilaabay qorsheyaal balaadhan oo isku dhaf ah oo lagu badbaadinayo shacabkaS. Ogadeenyaee gumeysiga Tigreegu ku xasuuqay, kuna bara kiciyey agagaarka deegaanka Cobole, oo ah goob uu damaaci ka hayo taliska Woyaanaha si uu shidaal uga qodi lahaa.
Xukunka cadaadiska iyo gumeysiga ku salaysan ee Melez Zenawi, ayaa maraya xaalad adag oo aan u saamixi karin inuu gumeysi ku sii haysto Ogadeenya, cabudhin iyo xasuuqna u geysto shucuubta dulma ee degta Itoobiya. Shacabka Itoobioya ayaa gaadhay heer aysan qarsanin cadaadiska ay ku hayaan taliska beesha Tigreegu, taas oo argagax iyo baqdin ku beertay Meles iyo inta ka ag dhow.
20-sano kadib, dad badan oo ka soo jeeda Soomaalida Ogadeenya, ayaa aaminay si buuxdana ugu qancay sababta ku kaliftay Jabhadda ONLF, inay qoriga kala hortagaan taliska Woyaanaha, markii xeel walba lagu dayey gumeysiga, taas oo keentay in ONLF, u hogaansamaan rabitaanka ummadda Ogadeenya, waxayna hubka u qaateen sidii ay karaamada iyo sharafta dadka iyo dalka u soo celin lahaayeen.
Dadka aamisanaa inuu sax ahaa go’aanka Jabhadda ONLF qoriga ku qaaday, ayaa aragtidooda ku saleeyey casharkii 7-da bilood ka socday dalka Liibiya. Shacabka Liibiya, ayaa Qadaafi kala hortagay mudaharaadyo nabad-galyo ah hase yeshee, Mucamar Qadaafi, ayaa kala hortagay duqeyn iyo xasuuq uu u geystey dadkii sida nabad-galyada ah ku banaan-baxayey. Shacabka Liibiya, ayaa bilaabay inay halgan hubeysan la galaan taliska Qadaafi, iyagoo aaminay tubta kaliya ee lagu badali karo nidaamka macangag ah ee Qadaafi iyo caruurtiisa ay tahay dagaal hubeysan.
Meles iyo xaaskiisa musuq-maasuqa ku caan baxday, ayaa ah kuwo waagu ku baryey oo fadhiya meel cidlo ah, waxaana sii kordhaya bur-burka muuqda ee ku imanaya nidaamkiisa had iyo jeer. Ma jirto meel looga baxsan karo cadhada iyo kacdoonka shucuubta Itoobiya ee gaajadda iyo xasuuqa ay badeen Males iyo qoyskiisa, mana jirto goob ay kaga baxsan karaan cadaaladda ay la goobayaan Shacabka Soomaalida Ogadeenya ee ku hoos jira gumeysiga Woyaanaha, oo dal iyo dibadba ugu diyaarka ah, siday u soo horjoojin lahaayeen maxkamada dambiyadda dagaalka ee Hauge.
Waxana la gudboon shacabkaS. Ogadeenya ee dalka iyo dibadaba ku nool, inay isu diyaariyaan ishana ku hayaan dhaqdhaqaaq-yada naf-lacaariga ah ee taliska woyaanuhu damacsan yahay inuu wakhti-dherer u noqdaan, islamarkaana meel qudha uga soo wada jeedsan lahaayeen hanashada iyo xoreynta dhulka Ogadeenya oo ah arin aan la hor istaagi karin.
W\_q: Mohamed Ilyas (Harag-shabeel).